‘राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैन’ — donnews.com
‘राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैन’
भनिन्छ, ‘राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैन ।’ तर हाम्रा शीर्ष नेताहरु कहिले चाटाचाट गर्ने त, कहिले थुकाथुक गर्ने गरेर जग हसाई रहेका छन् । के बोल्ने, के नबोल्ने भन्दा पनि जति सकिन्छ उछितो काढ्ने प्रवृत्ति हावी हुँदै गईरहेको छ । शीर्षस्थ नेताहरुले आफ्नो स्थान बिर्सदैं अति तुच्छ प्रकारको गाली गलौंज र आलोचनामा उत्रिएको देख्दा हाम्रा नेताका बोलीको स्तर र राजनीतिक संस्कार उदाङ्गो भएको छ । आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि स्थायी सरकार बनाउन मत दिएका आमजनताको भावनाप्रति धोका भएको छ । सत्तासिन नेकपाको आन्तरिक किचलो र कलहले देश भड्खालोमा जाँकिएको छ । समस्याको समाधान तर्फ लाग्नुको साटो अझै सत्तासिन नेकपाका नेताहरु समूह बनाएर शक्ति प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । मानौं, भयंकर क्रान्ति वा उपलब्धि रक्षाको लागि यो घम्साघम्सी वा संघर्ष भईरहेको छ । फगत, सत्ता र कुर्चीको छिनाझम्टीमा चर्किएको विवादले यतिबेला देशको विकास र भविष्य ठप्प भएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिका यतिबेला केबल प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको ईशारामा नाच्ने कठपुतलीको रुपमा देखिएको छ । यता, प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेताहरु माधवकुमार नेपाल र पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल यस्ता झगडियाका रुपमा देखा परेका छन् कि उनीहरुले बोल्ने शैली र आरोप–प्रत्यारोपले जनता दिक्क भईसकेका छन् । उसो त प्रतिपक्ष दलको भूमिका पनि प्रष्ट देखिदैंन । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्तासिन नेकपाको झगडाले फाईदा त पुगेको छ तर उनको ढुलमुले भूमिकाले पनि जनतालाई निराश तुल्याएको छ । यो देशका प्रधानमन्त्री भईसकेकाहरुको आरोप–प्रत्यारोप सुन्दा यिनीहरुमा न त देशप्रतिको चिन्ता देखिन्छ, न त यिनीहरुको वौद्धिकस्तर नै उच्च देखिन्छ ।
१७ हजारको बलिदान र १० वर्षको जनयुद्धको उपलब्धि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायत शीर्ष नेतृत्वको ईमान्दारिता र क्रान्तिप्रतिको निष्ठा नै स्खलित हुँदा आजको यो अवस्था आएको हो । सहिद, वेपत्ता र घाईतेहरुमाथि धोका दिने र विर्सने काम प्रचण्ड लगायतका नेताहरुले हिजो सत्तामा पुगेदेखि नै गर्दै आईरहेका थिए । जसका कारण आज उनीहरुको हालत पनि दयनीय बन्दै गईरहेको छ । जसका कारण आमजनतामा देश र जनताको मुक्तिका लागि नभई राजनीति केबल आफ्नो निहित स्वार्थ र सत्ताका प्राप्तिका लागि मात्र गरिन्छ भन्ने छाप पर्न गएको छ । यतिबेला सामाजिक सञ्जाल, टिकटक र सञ्चारमाध्यमहरुमा नियाल्ने हो भने हाम्रा शीर्ष नेताहरुको बोलि र राजनीतिक संस्कारको स्तर प्रष्टै झल्किन्छ । सत्तासिन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले सत्ताको चरम दुरुपयोग गरी हरेक दिन नाङ्गोनाच नाचिरहेका छन् । खुलेआम संविधान÷कानुनमाथि बलात्कार भईरहेको छ । यसबाट देशले निकास कसरी पाउँला अहिले नै केही भन्न सकिने स्थिति छैन । तर पनि यसरी देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने छुट कसैलाई पनि छैन । र, कमसेकम राजनीतिक संस्कारको ख्याल गर्दै चुलिदैं गएको समस्याको समाधान खोज्न तिर दलहरु लाग्न भने जरुरी छ । होइन भने अहिलेको परिस्थितिले देशलाई झन् पछाडि धकेल्ने काम मात्र गर्नेछ ।
सम्पादकीय सँग सम्बन्धित
वेथितिहरुसँग जुध्न युवा पुस्ताले राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्नैपर्छ
संकटमा बढी चलखेल गर्दछन् नाफाखोरहरु !
जनमतको अपमान र कोरोना कहर !
गुन्डा, तस्कर र भ्रष्टलाई राजनीति सुरक्षित थलो बन्दैछ
पोखराको नागरिक समाजको यथार्थता ? अब जागौं जनता !
‘पेटी ठेकेदार’ र ‘विचौंलिया’लाई होइन श्रमजीवीलाई रोजौं
कांग्रेस सभापति देउवाले माफी माग्नुपर्छ !